Internet Shutdown in Rakhine and Chin States – ရခိုငျနှငျ့ ခငျြးပွညျနယျမြားရှိ မွို့နယျမြားတှငျ အငျတာနကျ ဖွတျတောကျမှု အပျေါ ဒဈဂဈြတယျအခှငျ့အရေးလှုပျရှားဆောငျရှကျနကွေသော အဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့ အခွားအရပျဖကျအဖှဲ့အစညျးမြားမှ ကွညောခကျြထုတျပွနျခွငျး – Free Expression Myanmar
Jun 24, 2019 by Manager	in News သတငျး
All governments have the duty to protect the right to freedom of expression and information, all the more so if they are democratically elected. However, the decision to shut down internet access in nine townships in Rakhine and Chin States without any prior notice or limitation clearly infringes these human rights and isamatter of great concern to our organizations as it should be to all of the millions of internet users in Myanmar. The UN Human Rights Council has repeatedly adopted resolutions, most recently in 2018, identifying uninterrupted internet access asafundamental enabler for the enjoyment of human rights.
On 20 June the Ministry of Transport and Communications (MoTC) issuedadirective toward all mobile phone operators - MPT, Mytel, Telenor and Ooredoo - i to temporarily suspend mobile internet service in the conflict ridden townships of Rakhine and Chin States, effective at 10:00 PM (local time) on 21st June. According toalocal media report, mobile internet service has been suspended in 8 townships from Rakhine State (Ponnagyun, Rathedaung, Mrauk-U, Kyauktaw, Minbya, Myebon, Maungdaw, and Buthidaung) and Paletwa Township, Chin State although voice and SMS services are still available. More than one million residents of the affected areas have lost access to the internet asaresult.
According toamedia interview given by MoTC’s Permanent Secretary U Soe Thein, the directive was issued on the basis of the Article 77 of the 2013 Telecommunication Law, with the approval of the Union Government and he explained that the ban was intended “to maintain the stability and law and order in these areas”. He also said that the directive does not specify when the internet will be resumed in those affected areas. This is the first instance of application of Article 77 of 2013 Myanmar Telecommunication Law, and its use isamater of great concern to us all.
The Government has not yet made any public official announcement regarding the internet shutdown. Out of four mobile operators, so far, only Telenor informed the affected users of the internet shutdown via SMS and issuedapublic announcement regarding the matter.
Access by media and humanitarian organisations to the affected areas are restricted. The current internet shutdown will further reduce availability of information about the armed conflicts and its impacts on civilians. This increases our concerns for their safety as the ability of the government to protect them will be reduced. Removal of internet access, including to Facebook, reduces the ability of emergency services to communicate and locate people, and undermines the abilities of the authorities to disseminate important information to move people to safety. Furthermore less information will be available to those seeking to defend their human rights including elected members of parliaments, human rights defenders and the media.
Internet shutdown hasawide impact on the rights to livelihood, health, education and safety even during normal circumstances. Internet shutdown inaconflict area isamore serious concern regarding the safety of the community members. The right to information and freedom of expression by local residents playsapivotal role in ensuring help, emergency services and humanitarian aid can be delivered and facilitating contact between displaced families.
We therefore call on the government to -
We also call on telecommunications operators to provide full information about government-imposed restrictions on telecommunications access, and to join us in advocacy towards government to ensure that internet access is not restricted in future.
Daw Wai Phyo Myint - Myanmar Center for Responsible Business (MCRB)
09 795 333 831
Daw Yin Yadanar Thein - Free Expression Myanmar (FEM)
09 791 689 646
Daw Yatanar - ‘Myan’ ICT for Development Organization (MIDO)
09 450 025 616
၁။ အစိုးရတိုငျးတှငျ ပွညျသူလူထု၏ လှတျလပျစှာထုတျဖျောပွောဆိုခှငျ့နှငျ့ သတငျး အခကျြအလကျရရှိပိုငျခှငျ့ကို မွှငျ့တငျကာကှယျပေးရနျ တာဝနျရှိသညျ။ ဒီမိုကရစေီနညျးလမျးအရ ရှေးကောကျသညျ့ အစိုးရဆိုလငျြ ပို၍ပငျ တာဝနျရှိပသေညျ။ သို့သျောလညျး အမြားပွညျသူအား ကွိုတငျအသိပေးခွငျးမရှိဘဲ ရခိုငျနှငျ့ ခငျြးပွညျနယျမြားရှိ မွို့နယျ (၉) မွို့နယျတှငျ အငျတာနကျဖွတျတောကျရနျ ဆုံးဖွတျခွငျးသညျ အဆိုပါ လူ့အခှငျ့အရေးမြားကို ခြိုးဖောကျရာ ရောကျပွီး မွနျမာနိုငျငံရှိ အငျတာနကျ အသုံးပွုသူ သနျးပေါငျးမြားစှာအတှကျ စိုးရိမျစရာဖွဈသလို၊ ကြှနျုပျတို့အဖှဲ့အစညျးမြားကလညျး လှနျစှာစိုးရိမျမိသညျ့ ကိစ်စရပျဖွဈကွောငျး ပွောကွားလိုပါသညျ။ ကုလသမဂ်ဂ လူ့အခှငျ့အရေး ကောငျစီက ကနျ့သတျ၊ နှောငျ့ယှကျခွငျးမခံရဘဲ အငျတာနကျ အဆကျမပွတျရ ရှိရေးသညျ အခွားလူ့အခှငျ့အရေးမြားရရှိရေးအတှကျ အခွခေံအခှငျ့အရေး တဈခုဖွဈကွောငျး နောကျဆုံးအနဖွေငျ့ ၂၀၁၈ခုနှဈက ထုတျပွနျခကျြအပါအဝငျ လူ့အခှငျ့အရေးဆိုငျရာ ကွညောခကျြ အမြားအပွားတှငျ အတိအလငျးဖျောပွထားပွီး ဖွဈသညျ။
၂။ ဇှနျလ ၂၀ ရကျနကေ့ ပို့ဆောငျရေးနှငျ့ ဆကျသှယျရေးဝနျကွီးဌာနက ပွညျတှငျးရှိ မိုဘိုငျးဖုနျး ဆကျသှယျရေးလုပျငနျးမြားဖွဈသညျ့ MPT ၊ Mytel ၊ Telenor နှငျ့ Ooredoo သို့ ပေးပို့ကာ ဇှနျ ၂၁ ရကျနေ့ ည ၁၀ နာရီမှစ၍ ရခိုငျပွညျနယျနှငျ့ ခငျြးပွညျနယျမြားရှိ ပဋိပက်ခဖွဈပှားနသေော မွို့နယျမြားတှငျ အငျတာနကျဆကျသှယျမှုဖွတျတောကျရနျ အမိနျ့တဈရပျကို ပွညျတှငျးရှိ မိုဘိုငျးဖုနျး ဆကျသှယျရေးလုပျငနျးမြားအား ပေးပို့ကွောငျး သိရှိရသညျ။ ပွညျတှငျးမီဒီယာမြား၏ ဖျောပွခကျြ အရ ရခိုငျပွညျနယျရှိ မွို့နယျ (၈) မွို့နယျ (ပုဏ်ဏားကြှနျး၊ ရသတေ့ောငျ၊ မွောကျဦး၊ ကြောကျတျော၊ မငျးပွား၊ မွပေုံ၊ မောငျးတော၊ ဘူးသီးတောငျ) နှငျ့ ခငျြးပွညျနယျရှိ ပလကျဝမွို့နယျမြားတှငျ အငျတာနကျဆကျသှယျမှုဖွတျတောကျခံရကာ တယျလီဖုနျးချေါဆိုခွငျး နှငျ့ စာတို (sms) ပေးပို့သညျ့ ဝနျဆောငျမှုမြားသာ အသုံးပွုနိုငျကွောငျး သိရသညျ။ အဆိုပါ မွို့နယျမြားတှငျ သနျးခေါငျစာရငျးအရ နထေိုငျသူ လူဦးရတေဈသနျးကြျောသညျ ယခု စာထုတျပွနျခြိနျ (ဇှနျလ (၂၄) ရကျ၊ နလေ့ညျ (၁၂) နာရီ)အထိ အငျတာနကျဆကျသှယျပွတျတောကျမှုကို ကွုံတှလေ့ကျြရှိကွောငျး သိရသညျ။
၃။ ပို့ဆောငျရေးနှငျ့ ဆကျသှယျရေးဝနျကွီးဌာန အမွဲတမျးအတှငျးဝနျ ဦးစိုးသိနျးက အဆိုပါ အမိနျ့ကို ဆကျသှယျရေးဥပဒေ ပုဒျမ (၇၇) အရ “အမြားပွညျသူလုံခွုံရေးအခွအေနအေရ တညျငွိမျ အေးခမျြးမှုပကျြတယျ၊ တရားဥပဒစေိုးမိုးမှု မကောငျးဘူးဖွဈနတေဲ့ အခွအေနပေျေါမူတညျပွီး အစိုးရအဖှဲ့၏ ညှနျကွားခကျြအရ လုပျဆောငျခွငျးဖွဈပါတယျ” ဟု ပွညျတှငျးမီဒီယာတဈခုအား ဖွကွေားထားသညျကို တှရေ့ပွီး၊ အငျတာနကျဝနျဆောငျမှု ဖွတျတောကျမှုကို ပွနျလညျဖှငျ့ပေးမညျ့ အခြိနျကိုမူ မသိရသေးကွောငျး ပွောကွားထားသညျ။ ဆကျသှယျရေးဥပဒပွေဌာနျးပွီး ၂၀၁၃ ခုနှဈကတညျးက ယခုကဲ့သို့ ပုဒျမ (၇၇) ကိုသုံးကာ အငျတာနကျ ဆကျသှယျမှုအားဖွတျတောကျရနျ အစိုးရအဖှဲ့က ညှနျကွားမှုမြိုး မရှိခဲ့ရာ ယခုကဲ့သို့ ဖွတျတောကျရနျ ပထမဆုံးအကွိမျ အမိနျ့ ညှနျကွားခကျြထုတျပွနျခွငျးသညျ ကြှနျုပျတို့အားလုံးအတှကျ စိုးရိမျစရာ ကိစ်စရပျတဈခု ဖွဈပါသညျ။
၄။ ယခုကဲ့သို့ အငျတာနကျဖွတျတောကျမှုနှငျ့ ပတျသကျ၍ အစိုးရအနဖွေငျ့ ယခု စာထုတျပွနျခြိနျ (ဇှနျလ ၂၄ ရကျ၊ ၁၂ နာရီ) အထိ အမြားပွညျသူသိရှိစရေနျ ထုတျပွနျကွငွောခွငျး မရှိသညျကို တှရေ့သညျ။ မိုဘိုငျးဖုနျး ဆကျသှယျရေးဝနျဆောငျမှု ကုမ်ပဏီ ၄ ခုအနကျ ယခုအခြိနျထိ တယျလီနော ကုမ်ပဏီ တဈခုကသာ အငျတာနကျဖွတျတောကျခံရသညျ့ ဒသေရှိ အသုံးပွုသူမြားအား စာတို (sms) ပေးပို့ အကွောငျးကွားခွငျးနှငျ့ အမြားပွညျသူအတှကျ ကွညောခကျြတဈရပျ ထုတျပွနျခွငျး တို့ကို လုပျဆောငျခဲ့သညျကို တှရေ့သညျ။
၅။ အဆိုပါဒသေသညျ ပွညျတှငျး၊ ပွညျပမီဒီယာမြားဝငျရောကျ သတငျးရယူခှငျ့နှငျ့ လူသားခငျြး စာနာသညျ့ အထောကျအပံ့ပေးသညျ့အဖှဲ့အစညျးမြား ဝငျရောကျခှငျ့ကို ပိတျပငျထားသညျ့ ဒသေ ဖွဈသညျ။ သို့ဖွဈရာ ယခုကဲ့သို့ အငျတာနကျ ဖွတျတောကျခွငျးသညျ လကျနကျကိုငျ ပဋိပက်ခမြားနှငျ့ ၎င်းငျးတို့၏ ဒသေခံပွညျသူမြားအပျေါ ထိခိုကျမှုမြားနှငျ့ ပတျသကျ၍ သတငျးအခကျြအလကျရ ယူနိုငျမှုကို ပို၍ ထိခိုကျစပေါသညျ။ သို့ဖွဈရာ ဒသေခံပွညျသူမြား၏ လုံခွုံရေးအတှကျ အစိုးရက ကာကှယျပေးနိုငျမှု စှမျးရညျကဆြငျးနိုငျသညျဖွဈရာ ကြှနျုပျတို့၏ စိုးရိမျပူပနျမှုမြားကို ပို၍ တိုးလာစပေါသညျ။ Facebook စာမကျြနှာသို့ ဆကျသှယျနိုငျမှုအပါအဝငျ အငျတာနကျဆကျသှယျမှု ကို ဖွတျတောကျခွငျးသညျ အရေးပျေါဝနျဆောငျမှုလုပျငနျးမြားအတှကျ ဒသေခံပွညျသူမြားအား ဆကျသှယျနိုငျမှုနှငျ့ ၎င်းငျးတို့ရှိသညျ့ နရောမြားကို သိနိုငျစမှေုတို့ကို ထိခိုကျစသေညျ။ ထို့အပွငျ သကျဆိုငျရာတာဝနျရှိသူမြားက လူအမြားအား လုံခွုံရာသို့ ရှပွေ့ောငျးနိုငျရေးအတှကျ အရေးကွီးသညျ့ သတငျးအခကျြအလကျမြားဖွနျ့ဝရောတှငျအခကျအခဲဖွဈနိုငျသညျကို တှရေ့သညျ။ ထို့အပွငျ ဒသေခံပွညျသူမြား၏ အခှငျ့အရေးအရေး ကာကှယျနိုငျရနျအတှကျ သကျဆိုငျရာ ရှေးကောကျခံလှတျတျော ကိုယျစားလှယျမြားအပါအဝငျ၊ လူ့အခှငျ့အရေး ကာကှယျသူမြားနှငျ့ မီဒီယာမြားသို့ သတငျးပေးပို့ ဖလှယျနိုငျမှု ထိခိုကျစပေါသညျ။
၆။ အငျတာနကျဖွတျတောကျခွငျးသညျ သာမနျအခွအေနတှေငျပငျလြှငျ အသကျမှေးဝ မျးကြောငျး မှု၊ စီးပှားရေး၊ ကနျြးမာရေး၊ ပညာရေးနှငျ့ လုံခွုံရေးဆိုငျရာ ကိစ်စရပျမြားအတှကျ လှနျစှာ ဆိုးကြိုးသကျရောကျမှုဖွဈပျေါစသေညျ။ လကျနကျကိုငျပဋိပက်ခဖွဈပှားသညျ့ ဒသေမြားတှငျ အငျတာနကျဆကျသှယျမှု ဖွတျတောကျခွငျးသညျ ဒသေခံပွညျသူမြား၏ လုံခွုံရေးအတှကျ လှနျစှာ စိုးရိမျစရာကိစ်စရပျဖွဈပါသညျ။ ဒသေခံပွညျသူမြား၏ လှတျလပျစှာထုတျဖျောခှငျ့နှငျ့ သတငျး အခကျြအလကျရယူခှငျ့တို့သညျ လိုအပျသညျ့ အကူအညီမြား၊ အရေးပျေါဝနျဆောငျမှု မြားနှငျ့ လူသားခွငျးစာနာသညျ့ အထောကျအပံ့မြား ပို့ဆောငျနိုငျရေးနှငျ့ စဈပွေးရှောငျနှငျ့ ရှပွေ့ောငျး မိသားစုမြား အခငျြးခငျြး ဆကျသှယျနိုငျမှုရရှိရေးမြားအတှကျ လှနျစှာ အရေးကွီးသညျ။
၇။ သို့ပါ၍ ကြှနျုပျတို့သညျ အစိုးရအား အောကျပါ အခကျြမြားကို တောငျးဆိုပါသညျ။
အငျတာနကျဆကျသှယျရေး ဖွတျတောကျမှု နှငျ့ အငျတာနကျအမွနျနှုနျးလြော့ခမြှုမြားကို ခကျြခွငျးရပျတနျ့ကာ ရခိုငျနှငျ့ ခငျြးပွညျနယျမြားရှိ အဆိုပါ မွို့နယျ (၉)မွို့နယျတှငျ အငျတာနကျနှငျ့ တယျလီဖုနျးဆကျသှယျမှုမြား အပွညျ့အဝ ရရှိရေးကို ခွှငျးခကျြမရှိ ခကျြခွငျးလုပျဆောငျရနျ။
အနာဂတျတှငျလညျး အဆိုပါ ဒသေမြားသျောလညျးကောငျး၊ မွနျမာတနိုငျငံလုံးရှိ လကျနကျကိုငျပဋိပက်ခဖွဈပှားသညျ့ အခွားဒသေမြားအပါအဝငျ ကနျြဒသေမြားတှငျ သျောလညျးကောငျးနှငျ့ လာမညျ့ ရှေးကောကျပှဲကာလမြားတှငျ ယခုကဲ့သို့ အငျတာနကျနှငျ့ အခွားဆကျသှယျရေး စနဈမြားအား ထပျမံဖွတျတောကျခွငျးမြား၊ အငျတာနကျအ မွနျနှုနျးလြော့ခမြှုမြား (လုံးဝ) မပွုလုပျရနျ။
၈။ ထို့အတူ - ကြှနျုပျတို့သညျ မိုဘိုငျးဆကျသှယျရေးဝနျဆောငျမှု လုပျကိုငျသူမြားနှငျ့ အခွားအငျတာနကျ ဆကျသှယျရေးလုပျငနျးမြားလုပျကိုငျနကွေသော ကုမ်ပဏီမြားအားလညျး - အငျတာနကျနှငျ့ အခွားဆကျသှယျရေးဝနျဆောငျမှုမြားအပျေါ အစိုးရက ခမြှတျသညျ့ ကနျ့သတျခကျြမြားနှငျ့ ပတျသကျ၍ သတငျးအခကျြအလကျ အပွညျ့အဝအား အမြားပွညျသူ သိရှိနိုငျရေး ထုတျပွနျရနျနှငျ့ ထို့အတူ အနာဂတျတှငျ အငျတာနကျနှငျ့ တယျလီဖုနျး ဆကျသှယျမှုမြား အား ဖွဈတောကျခွငျးနှငျ့ ကနျ့သတျမှုမြား မရှိစရေနျ အစိုးရအား တိုကျတှနျးစညျးရုံးရာတှငျ ကြှနျုပျတို့နှငျ့ လကျတှဲဆောငျရှကျရနျ ဖိတျချေါတိုကျတှနျးအပျပါသညျ။
ဒျေါဝဖွေိုးမွငျ့ - မွနျမာ့စီးပှားရေးကဏ်ဍ တာဝနျယူမှုရှိရေးအထောကျအကူပွုဌာန (MCRB)
၀၉ ၇၉၅ ၃၃၃ ၈၃၁
ဒျေါယဥျရတနာသိနျး - လှတျလပျသောထုတျဖျောပွောဆိုခွငျးမွနျမာ (FEM)
၀၉ ၇၉၁ ၆၈၉ ၆၄၆
ဒျေါရတနာ - ဖှံ့ဖွိုးမှုအတှကျ “မွနျ” အိုငျစီတီအဖှဲ့ (MIDO)
၀၉ ၄၅၀ ၀၂၅ ၆၁၆
တောငျးဆိုသညျ့ အရပျဖကျလူမှုအဖှဲ့အစညျးမြားနှငျ့ ပုဂ်ဂိုလျမြား
ဖှံ့ဖွိုးမှုအတှကျ “မွနျ” အိုငျစီတီအဖှဲ့ (MIDO)
မွနျမာ့စီးပှားရေးကဏ်ဍ တာဝနျယူမှုရှိရေးအထောကျအကူပွုဌာန (MCRB)
ဒျေါအိမွတျနိုးခငျ (Digital Rights Activist)
အသံ - လှတျလပျစှာထုတျဖျောပွောဆိုခှငျ့လှုပျရှားမှုအဖှဲ့
HRDP - လူ့အခှငျ့အရေးကာကှယျမွှငျ့တငျသူမြားအဖှဲ့
Synergy - လူမှုသဟဇာတဖျောဆောငျရေးအဖှဲ့
၁။ အစိုးရတိုင်းတွင် ပြည်သူလူထု၏ လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်နှင့် သတင်း အချက်အလက်ရရှိပိုင်ခွင့်ကို မြှင့်တင်ကာကွယ်ပေးရန် တာဝန်ရှိသည်။ ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းအရ ရွေးကောက်သည့် အစိုးရဆိုလျင် ပို၍ပင် တာဝန်ရှိပေသည်။ သို့သော်လည်း အများပြည်သူအား ကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ ရခိုင်နှင့် ချင်းပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ် (၉) မြို့နယ်တွင် အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ရန် ဆုံးဖြတ်ခြင်းသည် အဆိုပါ လူ့အခွင့်အရေးများကို ချိုးဖောက်ရာ ရောက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရှိ အင်တာနက် အသုံးပြုသူ သန်းပေါင်းများစွာအတွက် စိုးရိမ်စရာဖြစ်သလို၊ ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်းများကလည်း လွန်စွာစိုးရိမ်မိသည့် ကိစ္စရပ်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားလိုပါသည်။ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကောင်စီက ကန့်သတ်၊ နှောင့်ယှက်ခြင်းမခံရဘဲ အင်တာနက် အဆက်မပြတ်ရ ရှိရေးသည် အခြားလူ့အခွင့်အရေးများရရှိရေးအတွက် အခြေခံအခွင့်အရေး တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း နောက်ဆုံးအနေဖြင့် ၂၀၁၈ခုနှစ်က ထုတ်ပြန်ချက်အပါအဝင် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကြေညာချက် အများအပြားတွင် အတိအလင်းဖော်ပြထားပြီး ဖြစ်သည်။
၂။ ဇွန်လ ၂၀ ရက်နေ့က ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြည်တွင်းရှိ မိုဘိုင်းဖုန်း ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် MPT ၊ Mytel ၊ Telenor နှင့် Ooredoo သို့ ပေးပို့ကာ ဇွန် ၂၁ ရက်နေ့ ည ၁၀ နာရီမှစ၍ ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ချင်းပြည်နယ်များရှိ ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေသော မြို့နယ်များတွင် အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုဖြတ်တောက်ရန် အမိန့်တစ်ရပ်ကို ပြည်တွင်းရှိ မိုဘိုင်းဖုန်း ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများအား ပေးပို့ကြောင်း သိရှိရသည်။ ပြည်တွင်းမီဒီယာများ၏ ဖော်ပြချက် အရ ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ မြို့နယ် (၈) မြို့နယ် (ပုဏ္ဏားကျွန်း၊ ရသေ့တောင်၊ မြောက်ဦး၊ ကျောက်တော်၊ မင်းပြား၊ မြေပုံ၊ မောင်းတော၊ ဘူးသီးတောင်) နှင့် ချင်းပြည်နယ်ရှိ ပလက်ဝမြို့နယ်များတွင် အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုဖြတ်တောက်ခံရကာ တယ်လီဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း နှင့် စာတို (sms) ပေးပို့သည့် ဝန်ဆောင်မှုများသာ အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ မြို့နယ်များတွင် သန်းခေါင်စာရင်းအရ နေထိုင်သူ လူဦးရေတစ်သန်းကျော်သည် ယခု စာထုတ်ပြန်ချိန် (ဇွန်လ (၂၄) ရက်၊ နေ့လည် (၁၂) နာရီ)အထိ အင်တာနက်ဆက်သွယ်ပြတ်တောက်မှုကို ကြုံတွေ့လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
၃။ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးစိုးသိန်းက အဆိုပါ အမိန့်ကို ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ (၇၇) အရ “အများပြည်သူလုံခြုံရေးအခြေအနေအရ တည်ငြိမ် အေးချမ်းမှုပျက်တယ်၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု မကောင်းဘူးဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး အစိုးရအဖွဲ့၏ ညွှန်ကြားချက်အရ လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြည်တွင်းမီဒီယာတစ်ခုအား ဖြေကြားထားသည်ကို တွေ့ရပြီး၊ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှု ဖြတ်တောက်မှုကို ပြန်လည်ဖွင့်ပေးမည့် အချိန်ကိုမူ မသိရသေးကြောင်း ပြောကြားထားသည်။ ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပြဌာန်းပြီး ၂၀၁၃ ခုနှစ်ကတည်းက ယခုကဲ့သို့ ပုဒ်မ (၇၇) ကိုသုံးကာ အင်တာနက် ဆက်သွယ်မှုအားဖြတ်တောက်ရန် အစိုးရအဖွဲ့က ညွှန်ကြားမှုမျိုး မရှိခဲ့ရာ ယခုကဲ့သို့ ဖြတ်တောက်ရန် ပထမဆုံးအကြိမ် အမိန့် ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက် စိုးရိမ်စရာ ကိစ္စရပ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
၄။ ယခုကဲ့သို့ အင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အစိုးရအနေဖြင့် ယခု စာထုတ်ပြန်ချိန် (ဇွန်လ ၂၄ ရက်၊ ၁၂ နာရီ) အထိ အများပြည်သူသိရှိစေရန် ထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း မရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။ မိုဘိုင်းဖုန်း ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှု ကုမ္ပဏီ ၄ ခုအနက် ယခုအချိန်ထိ တယ်လီနော ကုမ္ပဏီ တစ်ခုကသာ အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံရသည့် ဒေသရှိ အသုံးပြုသူများအား စာတို (sms) ပေးပို့ အကြောင်းကြားခြင်းနှင့် အများပြည်သူအတွက် ကြေညာချက်တစ်ရပ် ထုတ်ပြန်ခြင်း တို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။
၅။ အဆိုပါဒေသသည် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမီဒီယာများဝင်ရောက် သတင်းရယူခွင့်နှင့် လူသားချင်း စာနာသည့် အထောက်အပံ့ပေးသည့်အဖွဲ့အစည်းများ ဝင်ရောက်ခွင့်ကို ပိတ်ပင်ထားသည့် ဒေသ ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်ရာ ယခုကဲ့သို့ အင်တာနက် ဖြတ်တောက်ခြင်းသည် လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများနှင့် ၎င်းတို့၏ ဒေသခံပြည်သူများအပေါ် ထိခိုက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်ရ ယူနိုင်မှုကို ပို၍ ထိခိုက်စေပါသည်။ သို့ဖြစ်ရာ ဒေသခံပြည်သူများ၏ လုံခြုံရေးအတွက် အစိုးရက ကာကွယ်ပေးနိုင်မှု စွမ်းရည်ကျဆင်းနိုင်သည်ဖြစ်ရာ ကျွန်ုပ်တို့၏ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို ပို၍ တိုးလာစေပါသည်။ Facebook စာမျက်နှာသို့ ဆက်သွယ်နိုင်မှုအပါအဝင် အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှု ကို ဖြတ်တောက်ခြင်းသည် အရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် ဒေသခံပြည်သူများအား ဆက်သွယ်နိုင်မှုနှင့် ၎င်းတို့ရှိသည့် နေရာများကို သိနိုင်စေမှုတို့ကို ထိခိုက်စေသည်။ ထို့အပြင် သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများက လူအများအား လုံခြုံရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်ရေးအတွက် အရေးကြီးသည့် သတင်းအချက်အလက်များဖြန့်ဝေရာတွင်အခက်အခဲဖြစ်နိုင်သည်ကို တွေ့ရသည်။ ထို့အပြင် ဒေသခံပြည်သူများ၏ အခွင့်အရေးအရေး ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ရွေးကောက်ခံလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များအပါအဝင်၊ လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်သူများနှင့် မီဒီယာများသို့ သတင်းပေးပို့ ဖလှယ်နိုင်မှု ထိခိုက်စေပါသည်။
၆။ အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခြင်းသည် သာမန်အခြေအနေတွင်ပင်လျှင် အသက်မွေးဝ မ်းကျောင်း မှု၊ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးနှင့် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအတွက် လွန်စွာ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားသည့် ဒေသများတွင် အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှု ဖြတ်တောက်ခြင်းသည် ဒေသခံပြည်သူများ၏ လုံခြုံရေးအတွက် လွန်စွာ စိုးရိမ်စရာကိစ္စရပ်ဖြစ်ပါသည်။ ဒေသခံပြည်သူများ၏ လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ခွင့်နှင့် သတင်း အချက်အလက်ရယူခွင့်တို့သည် လိုအပ်သည့် အကူအညီများ၊ အရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှု များနှင့် လူသားခြင်းစာနာသည့် အထောက်အပံ့များ ပို့ဆောင်နိုင်ရေးနှင့် စစ်ပြေးရှောင်နှင့် ရွှေ့ပြောင်း မိသားစုများ အချင်းချင်း ဆက်သွယ်နိုင်မှုရရှိရေးများအတွက် လွန်စွာ အရေးကြီးသည်။
၇။ သို့ပါ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် အစိုးရအား အောက်ပါ အချက်များကို တောင်းဆိုပါသည်။
အင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေး ဖြတ်တောက်မှု နှင့် အင်တာနက်အမြန်နှုန်းလျော့ချမှုများကို ချက်ခြင်းရပ်တန့်ကာ ရခိုင်နှင့် ချင်းပြည်နယ်များရှိ အဆိုပါ မြို့နယ် (၉)မြို့နယ်တွင် အင်တာနက်နှင့် တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်မှုများ အပြည့်အဝ ရရှိရေးကို ခြွင်းချက်မရှိ ချက်ခြင်းလုပ်ဆောင်ရန်။
ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပါ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှု ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ပုဒ်မ ၇၇၊ ၇၈ နှင့် ကျန်ပုဒ်မများကို လူ့အခွင့်အရေးစံနှုန်းများနှင့်အညီ ပြန်လည် သုံးသပ်၊ ပြင်ဆင်ရန်။
အနာဂတ်တွင်လည်း အဆိုပါ ဒေသများသော်လည်းကောင်း၊ မြန်မာတနိုင်ငံလုံးရှိ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားသည့် အခြားဒေသများအပါအဝင် ကျန်ဒေသများတွင် သော်လည်းကောင်းနှင့် လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲကာလများတွင် ယခုကဲ့သို့ အင်တာနက်နှင့် အခြားဆက်သွယ်ရေး စနစ်များအား ထပ်မံဖြတ်တောက်ခြင်းများ၊ အင်တာနက်အ မြန်နှုန်းလျော့ချမှုများ (လုံးဝ) မပြုလုပ်ရန်။
၈။ ထို့အတူ - ကျွန်ုပ်တို့သည် မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှု လုပ်ကိုင်သူများနှင့် အခြားအင်တာနက် ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်နေကြသော ကုမ္ပဏီများအားလည်း - အင်တာနက်နှင့် အခြားဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများအပေါ် အစိုးရက ချမှတ်သည့် ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက် အပြည့်အဝအား အများပြည်သူ သိရှိနိုင်ရေး ထုတ်ပြန်ရန်နှင့် ထို့အတူ အနာဂတ်တွင် အင်တာနက်နှင့် တယ်လီဖုန်း ဆက်သွယ်မှုများ အား ဖြစ်တောက်ခြင်းနှင့် ကန့်သတ်မှုများ မရှိစေရန် အစိုးရအား တိုက်တွန်းစည်းရုံးရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် လက်တွဲဆောင်ရွက်ရန် ဖိတ်ခေါ်တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
ဒေါ်ဝေဖြိုးမြင့် - မြန်မာ့စီးပွားရေးကဏ္ဍ တာဝန်ယူမှုရှိရေးအထောက်အကူပြုဌာန (MCRB)
ဒေါ်ယဉ်ရတနာသိန်း - လွတ်လပ်သောထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမြန်မာ (FEM)
ဒေါ်ရတနာ - ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် “မြန်” အိုင်စီတီအဖွဲ့ (MIDO)
တောင်းဆိုသည့် အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်များ
ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် “မြန်” အိုင်စီတီအဖွဲ့ (MIDO)
မြန်မာ့စီးပွားရေးကဏ္ဍ တာဝန်ယူမှုရှိရေးအထောက်အကူပြုဌာန (MCRB)
ဒေါ်အိမြတ်နိုးခင် (Digital Rights Activist)
အသံ - လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့
HRDP - လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်မြှင့်တင်သူများအဖွဲ့
Synergy - လူမှုသဟဇာတဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့
Tagged with: 66(d) ၆၆(ဃ), Conflict, Digital rights, MDRF, Telecommunications Law ဆကျသှယျရေးပုဒျမ